Kooxaha Bayern Munich iyo Wolfsburg oo Badin Waayay iyo Borussia Moenchengladbach oo Badisay “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Kooxda Bayern Munich ayaa garoonkeeda Allianz Arena barbardhac 1-1 ah kula gashay kooxda Schalke 04.
Garsoorihii ciyaarta Bastian Dankert ayaa daqiiqadii 18-aad ee ciyaarta kaarka casaanka ah u taagay ciyaaryahan Jerome Boateng oo daafaca uga ciyaarayay kooxda Bayern Munich.
Gool hayaha kooxda Bayern Munich Manuel Neuer ayaa ciyaaryahan Eric Maxim Choupo-Moting ka qabtay rigooradii loo dhigay kooxda Schalke 04,sidasi ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Kooxda Bayern Munich ayaa goolka la hormartay,waxaana daqiiqadii 67-aad ee ciyaarta u dhaliyay ciyaaryahan Arjen Robben.
Tababaraha kooxda Bayern Munich Pep Guardiola ayaa aad ugu farxay goolka uu dhaliyay ciyaaryahan Arjen Robben.
Ciyaaryahan Benedikt Hoewedes ayaa daqiiqadii 72-aad ee ciyaarta goolka bareejada u dhaliyay kooxda Schalke 04.
Kooxda Bayern Munich ayaa horyaalka Jarmalka ee Bundesliga ku hogaamineyso 46-dhibcood,halka kooxda Schalke 04 ay horyaalka uga jirto kaalinta afaraad,iyadoo leh 31-dhibcood.
Kooxda Eintracht Frankfurt ayaa garoonkeeda Commerzbank-Arena barbardhac 1-1 ah kula gashay kooxda Wolfsburg oo kaalinta labaad uga jirto horyaalka dalka Jarmalka.
Kooxda Frankfurt ayaa goolka la hor martay,waxaana bilowgii qeybtii labaad ee ciyaarta u dhaliyay ciyaaryahan Stefan Aigner.
Ciyaaryahan Kevin de Bruyne ayaa dhamaadkii ciyaarta goolka bareejada u dhaliyay kooxda Wolfsburg.
Kooxda Wolfsburg ayaa kaalinta labaad uga jirto horyaalka dalka Jarmalka ee Bundesliga,waxana ay leedahay 38-dhibcood,halka kooxda Frankfurt ay horyaalka uga jirto kaalinta sagaalaad,iyadoo leh 24-dhibcood.
Kooxda Borussia Moenchengladbach ayaa garoonkeeda Borussia-Park 1-0 uga badisay kooxda Freiburg.
Ciyaaryahan Patrick Herrmann ayaa daqiiqadii 23-aad ee ciyaarta goolka guusha u dhaliyay Kooxda Borussia Moenchengladbach.
Kooxda Borussia Moenchengladbach ayaa kala horeynta horyaalka Jarmalka uga jiro kaalinta sedaxaad,waxana ay leedahay 33-dhibcood,halka kooxda Freiburg 14-aad,iyadoo leh 18-dhibcood.
Kooxda Hannover 96 ayaa garoonkeeda HDI-Arena barbardhac 1-1 ah kula gashay kooxda Mainz.
Kooxda Hannover 96 ayaa goolka la hor martay,waxaana daqiiqadii 26-aad ee ciyaarta u dhaliyay ciyaaryahan Jimmy Briand,sidasi ayaana lagu kala nasay qeybti hore ee ciyaarta.
Ciyaaryahan Elkin Soto ayaa daqiiqadii 77-aad ee ciyaarta goolka bareejada u dhaliyay kooxda Mainz 05.
Kooxda Hannover 96 ayaa kala horeynta horyaalka Jarmalka uga jirto kaalinta sideedaad,waxana ay leedahay 25-dhibcood,halka kooxda Mainz ay horyaalka uga jirto kaalinta tobanaad,iyadoo leh 22-dhibcood.